Wasiirka warfaafinta oo maanta hor tagaya golaha shacabka – Hornafrik Media Network
Wasiirka warfaafinta oo maanta hor tagaya golaha shacabka
Wasiirka warfafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa lagu war geliyey inuu hor yimaado xildhibaanada Golaha Shacabka, si ay u weydiiyaan su’aalo ay ka qabaan shaqada wasaaraddisa.
Xildhibaano gaaraya 11 mudane ayaa dalbaday in kulanka golaha shacabka uu hor yimaado wasiir Maareeye, si wax looga weydiiyo sida warbaahinta dowladda oo isagu uu maamulo ay u tabiso wararka baarlamaanka iyo su’aalo kale oo la xiriira shaqada guud ee wasaaradda warfaafinta.
Horay xildhibaano uu ku jiro Axmed Macalin Fiqi oo hadda warqadaan la ogeysiiyey ayaa u sheegay in warbaahinta qaranku ay qaadato oo kaliya xildhibaanada muxaafidka ah warkooda, iyadoo la reebayo warka xildhibaanada kale ee aan siyaasad ahaan la dhacsanayn xukuumadda hadda jirta.
Sida ku cad warqadda ka soo baxday golaha shacabka sagaalkii bishan wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa laga dalbaday inuu fadhiga golaha hor yimaado 15-ka Decenber oo ku beegan Axadda maanta ah.
Ku dhawaad 10 ruux oo lagu xiray dalka Albania.